Sawiro jaceyl romantic ah oo ka kooban kuwo xul ah
Heeso Qoraal Ah: Baro Mid kamid ah Heesaha Ugu Macaan Ee Qarniga
Baro heeso qoraal oo amaan dumar ah kuwii ugu macaan qarniga. Waxaan kolkii hore ka soo hadalnay heeso faro badan oo jaceyl ah, maxaa...
Erayo aanan xikmad lahayn waa baasto aan suugo lahayn
Waxaa qalbigaaga ku soo dhacay erayo xikmad ah. Waxaad isweydiisay sida loo qoro erayo xikmad ah? Hadaba jawaabta waa mid fuudd. Dadka...
Waa maxay jaceyl? Maxaa lagu macneyn karaa erayga jaceyl? Jawaabtu waa sahal. Waxaan inta badan jecelnahay inaan ogaano qeexida erayga...